संवैधानिक इजलासमा प्रश्न : सरकार बन्नै नसकेको हो कि राष्ट्रपतिले नबनाइदिएको हो ? - || यूथ फ्रन्टलाइन ||
संवैधानिक इजलासमा प्रश्न : सरकार बन्नै नसकेको हो कि राष्ट्रपतिले नबनाइदिएको हो ?
२०७८ जेष्ठ २६, बुधबार १३:३०:००
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस सुरु भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले दर्ता गरेको रिट निवेदकको तर्फबाट बहस सुरु गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले उपधारा ४ को प्रयोग नगरी उपधारा ५ मा जान नमिल्ने बताउँदै त्यहाँ नै त्रुटि भएको जिकीर गरेका छन् ।
उनले भने,“संविधानले ४ प्रकारको सरकारको कल्पना गरेको छ । त्यसमा धारा ७६ को उपधारा ४को प्रयोग भएको छैन । उपधारा ४को प्रयोग नगरीकन उपधारा ५मा जान मिल्दैन । यहाँ त्रुटी छ ।”
७६(५) अनुसार सरकार गठन गर्दा दलको ह्विप नलाग्ने बताउँदै उनले व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यो उपधाराको व्यवस्था गरिएको भन्ने जिकीर गरे । “त्यसैले संसद सदस्यको बहुमत लिएर गएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिको काम संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने हो । सरकार बन्न नसकेको हो कि राष्ट्रपतिले सरकार नबनाइदिएको हो ?” उनको प्रश्न थियो ।
यादवले १४९ जना सदस्यको हस्ताक्षर रहेको बताउँदै धारा ७६को उपधारा ५ को सरकार गठन गर्दा त्यसमा पार्टीलाई जोड्न नमिल्ने उल्लेख गरे ।
मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट